मुग्लिन सडक स्तरोन्नति : चट्टान खोपेर पहिरो रोक्दै - Rara Sanchar
मुग्लिन सडक स्तरोन्नति : चट्टान खोपेर पहिरो रोक्दै
संवाददाता : रारा सञ्चार प्रकाशित मिति : २० पुस २०७६, आईतवार १८:०३ प्रकाशित मिति : जनवरी 5, 2020
मुग्लिन, पुस २० गते । चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा काटिएको भित्ता ९चट्टाने भिर० खोपेर पहिरो रोक्ने प्रयास थालिएको छ । पहिरो जोखिम क्षेत्र छानेर अहिले सयौँ मजदूर चट्टाने भिर खोप्न व्यस्त छन् ।
मजदूर कतै फलामको डण्डीको भ¥याङ ९स्काफोल्डिङ०मा बसेर काम गरिरहेका छन् त कतै रुखमा बाँधिएको डोरीको अङ्कुशेमा अडिएर काममा व्यस्त छन् । कोही जाली बिच्छ्याउँदै र कोही चट्टानमा रड ९किला० ठोकेर नटबोल्टको काम गरिरहेका छन् ।
उक्त कामलाई ‘रक नेटिङ’ र ‘रक बोल्टिङ’ प्रविधि भनिन्छ । कतै बायोइन्जिनीयरिङ काम पनि भइरहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनीयर शिवप्रसाद खनाल बताउनुहुन्छ । उहाँले अहिले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको काम हेर्ने जिम्मासमेत पाउनुभएको छ ।
उक्त कामका लागि अहिले १०४ जना मजदूर चट्टान खोपेर पहिरो रोक्न खटिएका छन् । पहिलो चरणमा खस्न लागेको चट्टान र माटो निकालिन्छ । त्यसपछि चट्टान खोपेर ड्रिल गरी रड ९किला० गाडिन्छ ।
सबै क्षेत्रको रडमा जाली राखेर नट कस्ने आयोजनाका सहायक इन्जिनीयर कमल नेपालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चट्टाने भिरको उचाइ १०५ मिटरसम्मको छ । तोपे खोलामा १०५ मिटर उचाइ र ६० मिटर लम्बाइमा काम भइरहेको छ । एउटा बोरामा आलु हाले जस्तै गरी चट्टानलाई मोर्ने गरिन्छ । जसका कारण चट्टान तल खस्न पाउँदैन र अन्ततः त्यहीँ जाम हुन्छ ।
नारायण–मुग्लिन सडक निर्माण ९स्तरोन्नति० को काम २०७२ सालको शुरुबाट थालिएको थियो । कूल रु दुई अर्ब ९० करोडको ठेक्का सम्झौता थियो । पन्ध्र महिना ढिला गरी आयोजना २०७५ सालमा सम्पन्न भयो । आयोजनाको सबै गरेर कूल बजेट भने तीन करोड ९० लाख डलरको हो ।
आहा ! जाने होइन ढोरपाटन ? (९ तस्बिर)
गृहकार्य नगरेको भन्दै शिक्षकबाट निर्घात कुटिए एक विद्यार्थी
नक्सापासविना बन्दै छन् बालुवाटार प्रधानमन्त्रीनिवास, सिंहदरबारमा संसद् भवन र भैँसेपाटीमा मन्त्रीनिवास
२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार १०:१६
कसले राख्यो पुर्व शिक्षा राज्य मन्त्रि हस्त बहादुर मल्ल लाई लक्षित गरि बम ?
१४ मंसिर २०७४, बिहीबार १३:४२